Semalt သည် SEO အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့်ဝက်ဘ်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်
Semalt သည် SEO အတွက်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည် အရောင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့် Web Analytics
သင်ဖြစ်ပါသလား သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌အဆင့်မြင့်လိုလားသော်လည်း SEO သို့မဟုတ် Web Analytics နှင့်ရင်းနှီးမှုမရှိပါ။ သင်အမြန်ရလဒ်မရဘဲပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ကြောက်ပါသလား သို့မဟုတ်သင်၏ပန်းကန်ပြားတွင်အလွန်များနေပြီးသင့်ဆိုဒ်မြင်ကွင်းကိုမြှင့်တင်ရန်အချိန်မရှိသလော။
Semalt သည်ဤအရာအားလုံးကိုစဉ်းစားသည်။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုတွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုအဆင့်မြင့်ရန်၊ အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
၎င်းသည်အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုရှာဖွေသည်။ Engine Optimization (SEO) နှင့် Website Analytics ။
Semalt SEO ဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင်
SEO နှင့် Analytics အပြင် SSL၊ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဝဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။
ဟုတ်တယ်, Semalt ကမ်းလှမ်းသည် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် SEO ဝန်ဆောင်မှုကို Semalt ကဲ့သို့သောအပြိုင်အဆိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စဉ်သင်၏ SEO သို့မဟုတ် Analytics လုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုသင်ချွေးစရာမလိုပါ။ သူပေးထားသောဝန်ဆောင်မှုအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့။
SEO Marketing ။ ၎င်းသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များသောအကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေပြီး၊ သင်၏ site သည် Google search ၏ထိပ်တွင်ရှိသည်။ Semalt SEO ဝန်ဆောင်မှုတွင်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ၎င်းကိုဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုတွင်မြင့်မားစွာပေါ်လာစေရန်၊ အသွားအလာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအရောင်းတိုးတက်စေရန်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Analytics Semalt ကအချက်အလက်သည်အောင်မြင်သောဝက်ဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုသည်။ ၎င်းသည် Web Analytics ၏ကိရိယာနှင့် Semalt သည်သင့်ဆိုဒ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတိကျသောအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ site လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
Explainer Video ။ ထို့ကြောင့်သင့်ဆိုဒ်အား ပိုမို၍ လုပ်လိုသည်။ တီထွင်မှုရှိနေတုန်းပဲ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအွန်လိုင်းမှာရောင်းနေစဉ်။ Semalt Explainer Video solution သည်သင်၏စီးပွားရေးသဘောသဘာဝကိုဖော်ပြပြီးသင်၏စီးပွားရေးကိုအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ site ၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ရှင်းပြသောဗွီဒီယိုသည်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးရုံသာမကသင်၏စီးပွားရေးကို ဦး ဆောင်မှုအသစ်များသို့ဖွင့်ပေးသည်။
ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ ကြည့်ကြရအောင်။ အလုပ်လုပ်သောသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဆိုဒ်ရှိခြင်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးဝက်ဘ်မြှင့်တင်ခြင်း၏အစမဆိုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သွားရန်အချိန်နှင့်ဗဟုသုတမရှိပါက Semalt သည်သင့်အတွက်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းများလည်းကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။
site အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်ပါသလားသို့မဟုတ်ရှိပြီးသား site တစ်ခုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ Semalt ကဒါကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ Full-stack package တွင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပုံစံချခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
Semalt SEO ထုတ်ကုန်များအားလုံးတွင်ပါဝင်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု (SEO) သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ SEO vs. PPC ကိုစစ်ဆေးပါ။
SEO သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ On-site ကို optimization ဘို့? ပထမ ဦး စွာသင်သည်သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်နှင့် meta ဖော်ပြချက်ပိုကောင်းအောင်လိုအပ်သည်။ ဤနှစ်ခုသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်ပေါ်သည်။ သင်၏စာမျက်နှာ SEO တိုးတက်စေရန်သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ဘုံသော့ချက်စာလုံးကိုသုံးသင့်သည်။ ခေါင်းစဉ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများကို meta ဖော်ပြချက်များတွင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စာမျက်နှာပေါ်တွင် SEO တွင်ဂရပ်ဖစ်၊ အသံနှင့်စာသားများပါ ၀ င်သည့်သင်၏အကြောင်းအရာကိုပိုကောင်းအောင်ပါ ၀ င်သည်။ မှန်ကန်သောသိပ်သည်းဆနှင့်မှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်သော့ချက်စကားစုကိုသုံးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသံနှင့်ဂရပ်ဖစ်များတွင်သင့်ဆိုဒ်/ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများပါ ၀ င်သည်။ ခေါင်းစဉ်/ခေါင်းစဉ်များပါသင့်သည်။
Offsite SEO သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပြင်ပရှိလှုပ်ရှားမှုများမှသင်၏ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ရှာဖွေရေးယန္တရားအများစုတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္, နှင့်သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းရင်းမြစ်တွင် backlink များကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
အခြားအမျိုးအစားများ SEO တွင်သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုတိကျသောပထဝီအနေအထားသို့ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်ပါ ၀ င်သည့် SEO SEO ပါ ၀ င်သည်။
SEO မှတစ်ဆင့်သင်၏အရောင်းမြှင့်တင်ရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ မြှင့်တင်ရေး? Semalt AutoSEO Tool ဖြင့်ဤသို့ပြုလုပ်ရန် SEO ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ။
စိတ်, ဤကိရိယာသည်အမြန်ရလဒ်များကိုပေးစွမ်းပြီးကုန်ကျစရိတ်မှာအကျိုးရှိပါသည်။ Semalt AutoSEO ကိုသင့်ဆိုဒ်အတွက်ယခု ၀.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
AutoSEO tool သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ရန်စဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်မလားကိုသင်စဉ်းစားနေဆဲလား။ စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Semalt AutoSEO သုံးစွဲသူအောင်မြင်မှုဆိုင်ရာဇာတ်လမ်း
Semalt သည်သင်၏ဆိုက်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာမှ AutoSEO ကိုဖန်တီးပေးသည်။
Semalt အသုံးပြုမှု Semalt.com တွင်သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏အွန်လိုင်းရင်းမြစ်၏အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရန်၎င်း၏ Website Analyzer tool ဖြစ်သည်။ သင်၏အစီရင်ခံစာသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် SEO နှင့်စံနှုန်းများနှင့်ပြသထားသည်။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုတွင်သင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်သည်။
ပထမလအတွင်းရလဒ် ၂၀% ရရှိရန်နှင့်ဒုတိယလ မှစတင်၍ ပထမနှစ်အတွင်း Google TOP-10 တွင်နေရာချပါ။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအတွင်းပိုင်း (သို့) ပြင်ပတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်တိုအတွင်းအပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များရရန်သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ လွဲချော်လွန်းလှသော Semalt မှနောက်ထပ် SEO ထုတ်ကုန်တစ်ခုဤတွင်ပါ။
သင်၏ဆိုက်အတွက် FullSEO ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
သင့်ဆိုဒ်သည် SEO စံနှုန်းများနှင့် SEO ဘုံကျင့်စဉ်များကိုလိုက်နာရန်သေချာစေရန်။
ပထမ ဦး စွာ Semalt ကျွမ်းကျင်သူများကသင်၏ site SEO တွင်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာတင်ပြသည်။ ထို့နောက်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ မဖြစ်မနေအမှားများကိုသတ်မှတ်ပြီးသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်သင့်လျော်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်သည်။ ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူ Semalt SEO ကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်၍ FullSEO လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နိုင်သည်။
သင်လုပ်ပါသလား။ အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသင့်ရည်မှန်းချက်ဖောက်သည်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုရောက်နိုင်မလဲ။ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုမရရှိဘဲအရင်းအမြစ်များစွာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်အတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး E-commerce SEO Solution ကိုရပြီဟုထင်သည်။
Semalt E-commerce SEO tool သည်သင့်အတွက်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
Semalt E-commerce သည်သင်၏အွန်လိုင်းရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်ကိုမယုံကြည်သေးပါသလော။ ဤအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ပါ။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာမြှင့်တင်ရေးတိုးတက်မှုမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူလိုပါသလား၊ သော့ချက်စာလုံးများတိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်၊ အလုပ်နေရာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆိုဒ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်ဘာလဲ။ Semalt Analytic tool သည်ဤအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးပြိုင်ဘက်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Semalt Web Analytics သည်ရှာဖွေရေးအတွက်အသင့်ဖြစ်သည့်ဈေးကွက်ကွာဟချက်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပေးမည့်ပညာရှင်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သရုပ်ခွဲအချက်အလက်များကိုတင်ဆက်မှုအတွက် Excel စာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဆုကျေးဇူးတစ်ခုမှာ Semalt သည်သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရာထူးများအားပုံမှန်အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တိုးတက်မှုကိုအချိန်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အောင်မြင်မှုကို ဦး တည်သည့်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူဒေတာစစ်ထုတ်ခြင်းများများစွာပြုလုပ်သည်။
မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။ အောက်ဖော်ပြပါသုံးသပ်ချက်ကို Semalt ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကြည့်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်သင့်သနည်း SEO အတွက်သို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် Semalt?
Semalt တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်အဖွဲ့ရှိပြီး၎င်းသည်သူတို့လုပ်သောအရာအတွက်သာမဟုတ်ဘဲကောင်းမွန်သောဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းတို့တွင်အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး SEO ရှာဖွေရေး၊ ဝက်ဘ်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများကိုကျွမ်းကျင်ရန်သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
Semalt ကကတိထားရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏အလုပ်ကိုအလေးအနက်ထားသည်။ ဖောက်သည်များရရှိရန်မုသာမသုံးပါ၊ ထို့နောက်သူတို့ကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ Semalt ပညာရှင်များနှင့်၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသင်နှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။
ဒါဟာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဂုဏ်သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုတွင် SEO၊ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် web ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစသည့်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်များအမြောက်အများရှိနေသည်။ သင်သည်ရာပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များထံမှစစ်မှန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုကြည့်ရှုရန်၎င်း၏ site သို့သွားရောက်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပိုက်ဆံအတွက်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုပေးသည်။ သင်အနေဖြင့်လျင်မြန်ပြီးကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကျိုးအမြတ်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပေလော။
Semalt နဲ့အထူးလျှော့စျေးရယူပါ တစ်လထက်မကသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
< Sem3 သည်သင်၏ဘာသာစကားကိုပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ တူရကီ၊ အီတလီ၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ ပိုလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်အမည်ပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်၎င်း၏ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်လျှင်ယခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပြန်ကြားလိမ့်မည် လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုကမ်းလှမ်း။
သင် Semalt ကိုဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ် Skype မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်
Semalt ရဲ့အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာ SEO အတွက်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်၎င်း၏ Blog ။
အခမဲ့ Semalt ညှိနှိုင်းမှုတွင်:
• < span style="white-space: pre"> သင့်ဆိုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်၎င်းကိုမည်သို့ရှေ့သို့တိုးတက်စေခြင်းအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း
• ဂူးဂဲလ်တွင်အဆင့်မြင့်ရန်သင့်အားတားဆီးနေသော SEO အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
• ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်မည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Semalt တရားဝင် site ကိုသွားလည်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။